အော်ပရာအတွက်တံခါးပိတ် TAB ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - တေးသံစုံကဇါတ် - 2019
အဆိုပါအော်ပရာ၏ဖန်တီးသူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှာနှင့်ဘရောက်ဇာပြဿနာများပေါ်ပေါက်ရသောအရည်အသွေးမြင့်မားအဆင့်အထိရှိနေသော်လည်း။ မကြာခဏပေမယ့်သူတို့တစ်တွေက Web browser ၏ကုဒ်၏လွတ်လပ်သောပြင်ပအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူများသည်အော်ပရာကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါ၎င်းကိစ္စများတစ်ခုမှာအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်ဖွင့်လှစ်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အော်ပရာကအင်တာနက်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်မပေးသည်အဘယ်ကြောင့်အထဲကရှာတွေ့ကြရအောင်, သင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား?
internal browser ကိုပြဿနာတွေ။
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူပြဿနာများပေးခြမ်းနှင့်အသုံးပြုသူဘက်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအမှုမှာ, စသည်တို့ကိုဒီကွန်နက်ရှင်၏ modem သို့မဟုတ် Router ကပျက်ကွက် settings ကို၏ပျက်ပြား, cable ကိုအားလပ်ချိန်ကဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း, သင့်ရဲ့ service provider က Non-ငွေပေးချေမှုများအတွက်, နှင့်အခြားသဘာဝအခွအေနနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုကနေအသုံးပြုသူရပ်ဆိုင်းခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရှင်းပြချက်အဘို့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာကိုတိုက်ရိုက် သွား. , ရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်, အဖြေပေါ် မူတည်. တစ်လမ်းထွက်ရှာဖွေပါ။
ဒါ့အပြင် Opera နဲ့မဆိုအခြားဘရောက်ဇာကိုတဆင့်ဆိုဒ်များဖွင့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ထို operating system ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ၏အထွေထွေပြဿနာများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသည်။
အလွန်မကြာခဏအင်တာနက် access အရေးကြီးတဲ့ system ဖိုင်တွေကြောင့် setting ကိုပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်တို့ကြောင့် (ရုတ်တရက်ပါဝါပျက်ကွက်မှုကြောင့်ဥပမာ) အရေးပေါ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှကြောင့်အသုံးပြုသူများ၏တိလုပ်ရပ်များဖြစ်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခါစနစ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ code တွေရဲ့သံသယရှိနေခြင်း, တစ်ဦးကွန်ပျူတာ hard drive ကို antivirus ကို tool ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း, ဖြစ်နိုင်ရင် Virus ကူးစက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အခြားကိရိယာမှ။
ပိတ်ဆို့သာအချို့သော web site များသွားရောက်ကြည့်ရှုလျှင်, သင်လည်းသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဆိုဒ်များအခြားသောအရင်းအမြစ်များမှပိတ်ဆို့သို့မဟုတ် redirected, အဲဒီမှာကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမမလိုအပ်သော entries တွေကိုရှိသင့်ပါသည်။ ဤဖိုင် C တွင်တည်ရှိသည်: windows system32 drivers etc ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို web အရင်းအမြစ်များကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှ antivirus ကိုနှင့် firewalls ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ setting များကိုစစ်ဆေးနှင့်, လိုအပ်သောလျှင်, ခြွင်းချက်စာရင်းထဲတွင်လိုချင်သောက်ဘ်ဆိုက်များထည့်ပါ။
ကောင်းပြီ, သင်တန်း, သငျသညျဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားသည်နှင့်အညီ, Window အပေါ်ယေဘုယျအားအင်တာနက်ကို setting များကိုများ၏မှန်ကန်မှုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်အော်ပရာဘရောက်ဇာကိုတဆင့်လက်လှမ်းမမှီက်ဘ်ဆိုက်များမှာကွန်ရက်ကဒ်၏ကျရှုံးခြင်း, နှင့်အခြား web browser များကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်ပါတယ်များထဲတွင်အဆိုပါရေတွင်း၏ပျက်ကွက်နှင့်သင့် PC ကို၏အခြားဒြပ်စင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကြောင့်အော်ပရာ browser ၏ပြည်တွင်းရေးပြဿနာများတပိုင်တနိုင်၏အကြောင်းတရားများ၏ဖော်ပြချက်တွင်ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန်အဖြစ်သူတို့ကိုဖြေရှင်းဘို့ဖြစ်နိုင်ချေရွေးချယ်စရာအကြောင်းသင့်ပြောပြပါ။
အဘယ်သူမျှမက Web စာမျက်နှာများကိုဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသောများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာတစ်ဦးကို browser နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်တချို့က်ဘ်ဆိုက်များကနေတစ်ဦးချင်းစီ extension များ၏ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒီအစစ်ဆေးအဓိကအော်ပရာ menu ကိုဖွင့်ပစ္စည်းကို click "Extensions" နှင့်ထို့နောက် "များကိုစီမံကွပ်ကဲ Extensions" အပိုင်းကိုသွားစေရန်။ သို့မဟုတျ, ရိုးရိုးကီးဘုတ်ကို Ctrl + Shift + အီးအပေါ်ဖြတ်လမ်း key ကိုရိုက်ထည့်
သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီမှလာမယ့်သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသော extension များကိုပိတ်ထားပါ။
ထိုပြဿနာကိုပျောက်ကွယ်သွားမထားပါဘူး, နှင့်က်ဘ်ဆိုက်များနေဆဲဖွင့်လှစ်မထားဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သူက extension များထဲမှာမဖြစ်တယ်, ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဆက်လက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်ခဲ့ကြပါကအချို့သော extension ကိုနဲ့ပဋိပက္ခနေဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖော်ပြသည်။
အော်ပရာနောက်တဖန်ဆိုဒ်များဖွင့်လှစ်ရန်ငြိမ်းတိကျတဲ့ဖြည့်စွက်လှည့်ပြီးနောက်ကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအထဲတွင်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်, ဤ extension ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
သင့် browser ရှင်းလင်းရေး
အော်ပရာပွင့်လင်းမဟုတ်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကစာမျက်နှာဝဘ်စာမျက်နှာ, ပုံပြင်များများစာရင်းကိုနှင့်အခြားဒြပ်စင်များသိုလှောသင့် browser ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စေရန်, သင်တစ်ဦးသည်စင်ကြယ် browser ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။
, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်အဆိုပါအော်ပရာ menu ကိုမှ သွား. , စာရင်းထဲတွင်မှ "Options ကို" ကိုရွေးချယ်ပါ။ က Settings အပိုင်းမှာတော့သင်သည်လည်းရိုးရှင်းစွာ key combination ကို Alt + P. ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ်
ထို့နောက် "လုံခြုံရေး" ပုဒ်မခွဲသွားပါ။
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်ကျွန်တော်ဘလောက် settings "ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး" အတွက်ရှာဖွေနေပါသည်။ အထဲတွင် "browsing history ကိုဖျက်မည်" ဟုအဆိုပါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
စတာတွေက, သမိုင်း, cache ကို, စကားဝှက်တွေ, cookies: တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုသို့ကွဲပြားခြားနားသော parameters များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကမ်းလှမ်းတဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ် ကျနော်တို့က browser ၏အပြည့်အဝသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ကတည်းက, ထို့နောက် option တခုစီမှလာမယ့် checkboxes ကိုဖော်ထုတ်။
ဒါဟာဤကိစ္စတွင်အတွက်, ရှိသမျှဘရောက်ဇာကိုဒေတာ, ထိုကဲ့သို့သော password များကဲ့သို့သောအလွန်အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်, သန့်ရှင်းရေးအပြီးဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မည်, ကသီးခြားစီရေးသားဖို့, ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတစ်ဦးကသီးခြား directory ထဲတွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် function ကို (bookmarks ကို, etc) အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖိုင်တွေကိုကော်ပီကူးဖို့အကြံပြုကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာ data တွေကိုသန့်ရှင်းရေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အဘို့အဘယ်မှာပုံစံ၏ထိပ်မှာပါ "ဟုရှေ့ဦးစွာ မှစ. " တန်ဖိုးကိုရပ်အရေးကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မဟုတ်ရင်, လိုချင်သောရလဒ်ကပြောင်းလဲ default အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားပေမယ့်ရပါမည်။
အားလုံး settings ကိုလုပ်နေကြသည်ပြီးနောက် "Clear ကို browsing history" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
ကဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်ကို browser ကနေဒေတာတွေကိုရှင်းလင်းရေး။ ထို့နောက်သင်တစ်ဦးကို web page ကိုဖွင့်လှစ်ပါလျှင်စစ်ဆေးထပ်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
browser ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင် site ကိုဖွင့်လှစ်မထားဘူးသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုကြောင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသဘာဝတရား၏ဗိုင်းရပ်စ်လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားများဖိုင်များကိုပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖို့ browser ကိုစစ်ဆေးနေပြီးနောက်, Opera ကလုံးဝကွန်ပျူတာကနေဖယ်ရှား, ပြီးတော့သူက reinstall ရမည်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆိုက်များတွင်ဖွင့်လှစ်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းရပါမည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, အော်ပရာက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်မထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်အလွန်အမင်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်နိုင်သည်ပေးဘက်မှာပြဿနာတွေကနေ browser ကိုအတွက်အမှားအယွင်းများရန်။ ဒီပြဿနာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဟာသက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: El mejor Album de Opera del Mundo CD1 (အောက်တိုဘာလ 2019).